HGH Thailand - wax badan ka baro hormoonka koritaanka Bangkok
Hormoonka koritaankahormoonka koritaanka, GH, HGH, Somatotropin, somatropin) - hoormoon peptide ah ee pituitary anterior, oo loo isticmaalo ciyaaraha isboortiga si loo abuuro muruq go'a. Hormo kobcin ama somatotropin (oo ka soo jeeda qowmiyadda Laatiga ah) ayaa magaceeda loogu soo gaabiyey dhalinyaradaan, waxay keenaysaa isbeddel gaaban oo toosan (dherer). Kobaca ayaa badi waxay sabab u tahay koritaanka lafaha dheer ee addimada.
Heerka aasaasiga ah ee hoormoonka koritaanka ee dhiigga waa 1-5 ng / ml, halka sareysiyadu ay u kici karaan 10-20 iyo xataa 45 ng / ml. Waxaa markii hore lagu go'doomay 1956. Wuxuu ilaaliyaa hoormoonka koritaanka ee qanjirka 'pituitary gland' kaas oo ka jawaabaya calaamadaha hypothalamus. Caadi ahaan, ka dib labaatan sano ka dib, soosaarka hoormoonka jirka ayaa hoos u dhiga. Habka gabaygu wuxuu si toos ah ula xiriiraa heerka sii deynta hormoonka koritaanka. Celcelis ahaan, ka dib sanadaha 20, sanooyin kasta 10 heer kasta oo wax soo saarkiisu hoos u dhacay 15%.
Horumarka kobaca ma laha kala duwanaan galmo. Taasi waa, heerkeedu waa siman yahay ragga iyo dumarka. Inkastoo xaqiiqda ah in isticmaalka diyaargarowga ay ku jirto hormoonka koritaanka, ayaa mamnuucay VADO (Ururka Caalamiga ah ee La Dagaalanka Doping), Diyaarinta HGH waxaa laga heli karaa Thailand.
Qalabka Farageliyadeed ee HGH:
- Saamaynta anabolic - wuxuu sababaa koritaanka murqaha
- Tallaabo ka horjeeda habdhaqanka - wuxuu joojiyaa burburka muruqa
- Waxay yareysaa dufanka jidhka
- Wuxuu hagaajiyaa isticmaalka tamarta
- Xawaaraha bogsashada
- Waxay leedahay saamaynta dib u nooleynta
- Daqiiqada dib-u-kicinta xubnaha jirka dhexdiisa (da'da leh da'da)
- Waxay keenaysaa koboca lafaha waxayna kordhisaa kobaca dhalinyarada ilaa sannadka 26 (illaa xiritaanka aagagga koritaanka), waxay xoojisaa lafaha
- Waxay kordhisaa heerka gulukoosta dhiigga
- Waxay xoojisaa nidaamka difaaca jirka
Qaar ka mid ah saameynada daroogada ayaa sabab u ah, laakiin qeyb weyn oo ka mid ah saameynteeda ayaa dhexdhexaad ah IGf-1 (horey waxaa loo yaqaan somatomedin C), taas oo ay soo saartay hormoonka koritaanka ee beerka iyo kicinta Koritaanka ugu badan ee xubnaha gudaha. Ku dhawaad ​​dhammaan saameynta hormoonka koritaanka ee ciyaaraha la xiriira hawlgalka IGF-1.
Isbedelada da'da ku xiran ee dheecaanka hoormoonka koritaanka
Sirta hormoonka hormoonka koritaanka si joogto ah ayuu u yareeyaa da'da. Waa yar tahay dadka waayeelka ah, kuwaas oo hoos u dhigay asal ahaan, iyo inta jeer oo qiyaasta sare ee qanjidhada. Heerka asaasiga ah ee hoormoonka koritaanka ayaa ugu badnaan ah ilmanimada hore, korodhka sare ee qarsoodiga ugu badan ee qarsoodiga ah inta lagu jiro mudada dhalinyarada ah ee koritaanka tooska ah iyo sidoo kale xilliga qaan-gaarnimada. Qulqulka Circadian ee qarsoon ee hormoonka koritaanka:
Miisaanka hormoonka hormoonka iyo hormoono kale oo badan oo dhacaya mudo gaaban oo leh dhowr faqiir inta lagu guda jiro maalinta (badiyaa qanjirada ugu sarreysa waxay dhacdaa saacadaha 3-5). Heerka ugu sarreeya waxaa lagu arkay habeenkii, qiyaastii saacad kadib markaad seexato.
Hormoonka kobcinta jirka ee dhismaha jirka ee Thailand
Ugu horreyntii, diyaarinta hormoonada hormoonka ayaa loo bilaabay in loo isticmaalo ujeedo caafimaad, si kastaba ha ahaatee, ku dhowaad isla xilligan hormoonkan ayaa ku baahsan kubada cagta, sababtoo ah awooddiisu tahay in la kordhiyo tirada muruqyada iyo in la yareeyo dufanka jidhka. Diyaargarowgii ugu horeeyay ee HGH wuxuu ahaa boogaha pituitary, kaliya 1981 oo kaliya ayaa loo sameeyay somatotropin daroogo dib u habeyn ah.
1989, hormoonka kobaca ee xabadka ayaa la mamnuucay guddiga Olombikada. Inkastoo xaqiiqda ah in isticmaalka hoormoonka koritaanka ee ujeedooyinka cayaaraha la mamnuuco, tobankii sano ee la soo dhaafay, iibinta daroogada ayaa kordhay dhowr jeer. Caadi ahaan, hormoonka koritaanka ayaa loo isticmaalaa isboortiska, gaar ahaan jirka jirka, halkaas oo lagu daro daawooyinka kale ee anabolic.
Kordhinta murqaha caatada ah iyo gubashada baruurta
Sababta ugu weyn ee caannimada HGH ee isboortiga waa awoodda lagu yareeynayo xaddiga dufanka subcutanous. Intaa waxa dheer, daraasaduhu waxay muujiyeen in hormoonka koritaanka uu keeno kororka muruqa ee caanaha, unugyada isku xiran iyo kordhinta mugga unugyada murqaha sababtoo ah isu-ururinta dareeraha.
Waxyaabo kale oo faa'iido leh oo hormoonnada hormoonka ah - yaree inta jeer ee dhaawacyada. Tani waxay sabab u tahay awooddeeda ah inay xoojiso lafaha iyo isku-xirnaanta (jibbaarada, jooniska). Hormarinta kobaca waxay xoojisaa bogsashada iyo nudaha unugyada kadib dhaawacyada.
Waa in la ogaadaa in isticmaalka HGH ee korontada waxtarkeedu yahay mid aan micno lahayn, tan iyo markii tijaabada lagu ogaaday in aysan kordhin waxqabadka awoodda. Somatotropin waxa kale oo ay kordhisaa stamina iyo waxqabadka, iyo liddi ku ah, hoos u dhac ku yimaada daalka diidmada iyo soo kabashada soo kabashada, sidaas awgeed hoormoonka koritaanka ayaa ah wax aan faa'iido u laheyn cayaaraha ciyaaraha noocan oo kale ah, halkaasoo tilmaamahan.
Gabagabeynta guud ayaa ah in hormoonka koritaanka loo isticmaali karo ciyaaraha iyada oo ujeedadu tahay helitaanka gargaarka.
waxtarka sarreeya, dhacdooyinka yaryar ee saamaynta daawooyinka, daroogadu ma saamaynayso hawsha guska iyo awoodda uu u keeno saameyn aan kor ku jirin oo uma baahnid PCT ka dib marka ay miisaankeedu yahay miisaan yar oo kordhay (3-4 kg), iyo xaaladaha qaarkood ma ahan isbeddel kasta oo lala xiriiriyo khasaaro badan oo dufan leh.
Qiimaha sare ee daroogada wuxuu ku saabsan yahay 2-3 kun doolar oo dakhliya ah.
Dhibaatooyinka kale ee hoormoonka koritaanka
Sababtoo ah HGH waxaa si dabiici ah loo soo saaray jirka bini'aadamka, saameynta daaweynta HGH waa dhif. Dhibaatooyinka kale ee badanaa waxay ku dhacaan inta badan kiisaska koritaanka hormoonka loo isticmaalo qiyaasaha ka sareeya intii lagugula taliyay iyo waqti ka badan intii lagu qeexay khubarada. Ficil ahaan, waxaa jira dhibaatooyinka soo raaca ee koritaanka manida Hormoon (inta jeer ee dhacdo):
Cudurka dabaysha waxaa lagu muujiyaa xanuun iyo kabuubyo xagjirnimada. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in tirada kordhaysa ee muruqyada ay ku cadaadinayaan dareemayaasha dhinacyada. Dhibaatadani ma ahan mid khatar ah oo si degdeg ah loo xalliyo ka dib marka la yareeyo qiyaasta tallaalka.
Rakabidda dareeraha, wax dhib ahna ma leh, sababtoo ah isu-ururinta dareeraha waxay ku jirtaa muruqyada, iyaga oo siinaya cabbir weyn iyo dabeecad. Guud ahaan, dhacdooyinka ugu yar ee dib-u-celinta ka dib dhammaadka koorsada.
Cadaadis dhiig oo sarreeya - ayaa la baabi'iyaa iyadoo la yareynayo qiyaasta qiyaasta HGH, ama isticmaalka daroogada antihypertensive.
Xakamaynta shaqada qanjirka thyroid - waa su'aal aan muuqan, maxaa yeelay cadaadisku aad ayuu u hooseeyaa. Dhimista iyo kordhinta waxtarka wareegga waxaa loo isticmaalaa Thyroxin qiyaasta xNUMX mcg maalintii. Kadib joojinta hoormoonka koritaanka, hawlaha qanjirka ayaa si buuxda loo soo celiyay.
Hyperglycemia - kordhinta heerka gulukoosta dhiigga. Insulin-ta la tirtiray ama daroogada oo kiciya beeryarada (gliclazide). Caadi ahaan uma baahna tallaabooyin dheeraad ah oo si buuxda loola hadlo. Waxa kale oo aad qaadan kartaa dheellitiro leh alfa lipoic acid, waxay soo celisaa dareenka insulin.
Acromegaly - cudurku wuxuu ku dhacaa sababtoo ah xadgudub loo geystay daroogada hormoonka koritaanka. Marka si sax ah loo isticmaalo, lama helin.
Hypertrophy ee wadnaha iyo xubnaha kale waxay ku dhacaan oo keliya marka ay dhacdo isticmaalka dheeraadka ah ee HGH ee qiyaaso badan. Marka si sax ah loo isticmaalo, lama helin.
Dhibaatooyinka xasaasiga ah ee hormoonka koritaanka
Korodhka caloosha - waxaa si weyn loo rumeeysan yahay in hoormoonka koriinka uu kordhin karo caloosha sababtoo ah hyperplasia ee xubnaha gudaha (sida xiidmaha iyo xubnaha u leeyihiin qaboojiyeyaasha IGF-1). Hase yeeshe, ma jiraan wax caddayn cilmi ah oo ku saabsan xaqiiqadan, si kastaba ha ahaatee, tusaalayaal cad oo isbeddel ah ee caloosha ku jira bey'ada waxqabadka jirka ee xiriirka la leh. Si kastaba ha ahaatee, waayo-aragnimada dhabta ah ee ciyaartoyda cayaaraha badankoodu waxay muujinayaan in koorsooyinka caadiga ah ee hoormoonka koritaanka uusan u horseedi karin koritaanka caloosha. Khubaradu waxay aaminsan yihiin in balaarinta caloosha (internetka Ingiriisku uu ku badan yahay ereyga "GH gas") wuxuu leeyahay waxyaalo badan oo dabiiciga ah oo kiimikada ah waxaana suurtagal ah marka la isticmaalayo qiyaaso badan oo GH ah oo lagu daro insulin, steroids, oo ay weheliso isticmaalka qadar badan Cuntada.
Saameyn ku yeelashada xoogga iyo shaqada guska - HGH wax saameyn ah uma leh hawsha galmada.
Diidmada hormoonka hormoonka hormoonka koritaanka - Professor Elmer M. Cranton, MD ayaa daraasad ku samaysay bukaano badan oo 100 ah, oo aan la ogaanin in la joojiyo qarsoodigeeda.
Kansarka - hormoonka koritaanka wuxuu keenaa isdabajooga sii kordhaya ee qaybta unugyada burooyinka, sidaas darteed cilmi-baarayaashu waxay ka walaacayaan haddii hormoonka koritaanka ee muruqyada. Waxaa jiray daraasad cilmi baaris ah, oo ay ka soo qaybgaleen dadka lagu daaweeyo hoormoonka koritaanka, marxaladaha neoplastic-ka ee aanay ahayn mid ka duwan kuwa kale ee ka hadli kara maqnaanshaha saameynta kansarka ee hormoonka koritaanka.
Gabagabada guud ee ku saabsan saamaynta daawada
Hormo kobaca ayaa si dhif u ah u keenta saameynaha daawada haddii lagu dabaqo qiyaaso dhexdhexaad ah. Ku dhawaad ​​dhammaan saameynada daaweyntu waa kuwo la beddeli karo. Isla markaa, waxaa si cad loo xaqiijiyay in diyaargarowga HGH ay dib u soo nooleyn karto jirka si loo hagaajiyo jimicsiga jirka, yareynta kolestaroolka, hagaajinta maqaarka, xoojinta lafaha iyo seedaha iyo saameyno kale oo badan.
Xididdada hormoonka koritaanka
Xakamaynta ugu weyn ee hormoonka hormoonka korriinka - hormoonada peptide ee hypothalamus (somatostatin iyo somatoliberin), oo qarsoodi ah unugyada neurosecretory ee hypothalamus galay xididdada portal ee pituitary waxayna si toos ah u dhaqmaan somatotrope. Si kastaba ha noqotee, dheellitirka hoormoonada iyo dheecaanka hoormoonka koritaanka waxaa saameeya waxyaabo badan oo jireed. Cilmi-baadhayaashu waxay caddeeyeen in heerka dheecaanka hormoonada hormoonnada kor loo qaadi karo waqtiyada 3-5, iyada oo aan la isticmaalin hababka hoormoonka.
Peptides waa kuwa ugu sareeya ee hormoonada hormoonka koraya, waxay kordhiyaan xaddiga 7-15 kharashka koorsada u dhigma dhowr jeer hoos:
HGH Frag (176-191) - Qaybta
Hormar kobcinta iyo peptides ee jirka jirka
Peptides (Laga bilaabo Giriigga πεπτος - nafaqo) - Qoyska walxaha molecules laga dhiso ka dibna ay ka soo baxaan α-amino acids oo ku xiran bondska peptide (amide). Waa xeryahooda dabiiciga ah ama synthetic oo leh tobannaan, boqollaal ama kumanaan mitir ah Monomeric - amino acids. Fasalkani waa mid aad u kala duwan waxaana uu ku shaqeeyaa jirka oo ah hawlo kala duwan. Qodobkan waxaan tixgelin doonaa oo kaliya peptide kuwa loo isticmaalo ciyaaraha si loo saxo tilmaamayaasha muuqaalka.
Waqtigan xaadirka ah ee suuqa Thailand Inta badan iyo inta badan waxaa jira peptide, kuwaas oo ah kiciyeyaasha hormoonka koritaanka. Peptides ugu caansan ee jirdhiska jirka ee Thailand:
Laga soo bilaabo kooxda Ghrelin (GHRP): (samee feejignaan ciriiri ah oo la gooyey isla markiiba ka dib mudista, iyadoon loo eegin waqtiga maalinta iyo joogitaanka somatostatin ee dhiiga).
GHRP-6 iyo Hexarelin
Laga soo bilaabo kooxda koritaanka Hormone sii daaya hormoonka (GHRH): (hordhaca jidhka wuxuu keenaa kor u kaca daloolka oo ah mid xooggan saacadaha marka maskaxda dabiiciga ah ee GRS ay hoos u dhigtay somatostatin, oo aad u sarreeya inta lagu jiro dabiiciga Korodhka culeyska GR (tusaale ahaan inta lagu jiro habeenka). Si kale loo dhigo GHRH waxay kordhisaa qarsoodiga GRS, iyada oo aan wax khasaare ah u geysaneynin habka dabiiciga ah.)
HGH Frag (176-191) Waa qayb ka mid ah hoormoonka koritaanka (baruurta gubanaysa)
Su'aalo badan ayaa soo baxa, sababta ay u isticmaalaan walax cusub oo peptide ah, haddii ay jirto hormoon kobcin ah oo bani-aadmi ah? Jawaabtu waa sahlan: kiciyeyaasha peptide waxay leeyihiin faa'iidooyin badan oo adag.
Peptide aad buu uga jaban yahay hoormoonka koritaanka. Kharashka koorsada la midka ah ayaa noqon doona mid hooseeya.
Farsamooyinka kala duwan ee ficilka iyo nus-nimada waxay noo ogolaaneysaa inaanu hagaajinno xarriiqda foojignaanta ah ee loogu talagalay jawaab celinta anabolic ee ugu fiican.
Dhibaatooyinka kala duwan ee gaajada iyo dheef-shiid kiimikaadka, ayaa kuu oggolaanaya inaad siiso doorbidka kuwa ama walxaha kale.
Xilligan la joogo wax soo saarka iyo qaybinta peptides maaha mid sharciyeyn ah, sidaas darteed waa amaan inaad internetka dalbato.
Si degdeg ah oo gebi ahaanba kala diri, sidaa daraadeed ma jirto cabsi ah in la kontoroolo doping.
Peptide, iyo sidoo kale hoormoonka koritaanka caadiga ah waa sahlan tahay in la hubiyo xaqiiqada. Waa ku filan in lagu baaro heerka somatotropin ee plasma ka dib markii maamulka daroogada.
Si aad ugu haboonaato hormoonada kobcinta koorsooyinka?
Horumarka korriinka waxaa loo isticmaali karaa ragga iyo haweenka da'doodu ka weyn tahay da'da sanadka 20 (dhalinyaradu waxay yeelan karaan kobaca asmmirka ee lafaha) si ay u xoojiyaan kor u qaadida musqusha. Wadarta tirada guud waxay kor u kacdaa, tani waxay dhacdaa natiijo weyn luminta dufanka.
Dhibaatooyinka kale ee inta lagu jiro iyo ka dib kooraska lama ogaan karo, badanaa waa kuwo dib u laaban kara.
Koorsadu waxay u dhigantaa dadka qaba sonkorowga (hormoonada koritaanka waxay kordhisaa caddadka gulukooska ee dhiigga), taxaddar waa in loo isticmaalaa hypertension (hoormoonka koritaanka bini'aadamku wuxuu kordhin karaa). Ka hor intaadan isticmaalin daroogada waa inaad la tashataa takhtar.
Top 3 caan ka ah HGH ee Thailand